Lalatiana Ravololomanana : “Mila handraisana fepetra Ravalomanana” -
AccueilRaharaham-pirenenaLalatiana Ravololomanana : “Mila handraisana fepetra Ravalomanana”
11/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy misy izay tsy vaky vava ankehitriny noho ny ataon’i Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara na Tim.
Nanoloana ny zava-nitranga, ny sabotsy 8 jolay teo, izay saika nankalazan’ny antoko Tim ny faha-15 taona nijoroany mantsy, nanambara i Lalatiana Ravololomanana, anisan’ireo mpanolotsaina ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa efa mihoa-pefy ingahy Marc Ravalomanana. “Ho ahy manokana aloha, mila filaminana tanteraka Antananarivo ary tsy tokony hatao toeram-pikorontanana intsony Antananarivo. Ampy izay ny fanakorontana ary tsy tokony hatao sorona sy hatao fitaovana intsony ny vahoaka. Noho izany, mila handraisana fepetra ireny hetsika fanakorontanana ireny sy ingahy Marc Ravalomanana manokana izay nahatonga iny hetsika iny”, hoy ity mpanolotsaina monisipaly ity.
Nohamafisiny ihany koa fa tsy misy ambonin’ny lalàna izany mihitsy, na iza izy na iza. Noho izany, hoy hatrany izy, tokony hisy fangaraharahana ny raharaha mahakasika ity Filoha teo aloha ity. “Raha ny marina anie, mbola manana raharaham-pitsarana ingahy Marc Ravalomanana e! Raha ny fahalalako manokana mantsy dia tsy mbola voafafa ny heloka vitan’ity filohan’ny Tim ity tamin’ireny “Raharaha 7 febroary 2009” ireny. Noho izany, meloka ary mbola meloka ingahy Ravalomanana. Ny fampihavanam-pirenena koa, etsy andaniny, mbola tsy tafapetraka tsara.Noho izany, mitaky ny fampiharana ny lalàna aminy ny tenako satria averiko ihany fa tsy misy ambonin’ny lalàna izany eto amin’ny tany sy ny firenena, na iza izy na iza”, hoy i Lalatiana Ravololomanana.
Raha ny marina, efa mikasa fanonganam-panjakana, toy ny nataony tamin’ny taona 2002 indray ity filoha nasionalin’ny antoko Tim ity. Porofon’izany mantsy ny teny naloaky ny vavany vantany vao tafaverina an-tanindrazana, teny amin’ny trano fonenany eny Faravohitra, fa tsy hiandry ny “Fifidianana 2018” izy. Izany no midika fa miketrika fanonganam-panjakana indray i Marc Ravalomanana sy ny forongony.
Ankoatra izay, nambaran’i Lalatiana Ravololomanana izay fa tsy fananan’i Marc Ravalomanana mivady ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ka hanaovan’izy ireo izay tiany hanaovana azy. Manaraka izany, tsy natao ho fitaovana fanehoan-kevitra politika ho an’ny antoko Tim ihany koa ny kianjan’i Mahamasina sy ireo mpanolotsaina monisipaly. Etsy andaniny, nambarany fa tokony hapetraka ny politika fanehoana firaisankina, ny fifampitsinjovana, fa tsy korontana lava izao no iainan’ny vahoaka.
Nitovy fomba fijery ny Roi du Maroc Mohamed VI sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Samy mifototra amin’ny fanorenana fotodrafitrasa maharitra ho an’ny taranaka ny azy ny famaritana ny atao hoe « fampandrosoana ». Ho an’ny filoha Hery ...Tohiny